Nabadsugida Jubbaland oo soo bandhigtay Sarkaal Shabaab ka goostay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Nabadsugida Jubbaland oo soo bandhigtay Sarkaal Shabaab ka goostay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nabadsugida Jubbaland oo soo bandhigtay Sarkaal Shabaab ka goostay
By Ardaan Yare on 18th November 2019
Nabadsugida Jubbaland ayaa waxaa ay Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose kusoo bandhigeen sarkaal sare oo katirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab,kaas oo isku soo dhiibay Ciidamada Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Sarkaalkaan ayaa waxaa lagu magacaabaa Rayaan Shiikh Nuuur ,balse Shabaabka dhexdooda looga yaqaano (Abuu Xamsa),waxaana uu ahaa madaxii u qaabilsanaa dhanka gaadiidka Al-Shabaab Gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiisha Nabadsugida Jubbaland ayaa waxaa ay sheegeen in sarkaal kaan uu la soo xioriiray,isaga oo u adkeysan waayay dhibaatooyinka ay bulshada ku hayaan Al-Shabaab,sidaasi daraadeed uu kasoo baxay.
Al-Shabaab weli dhankooda kama hadlin oo ku aadan Ninkaan ay soo bandhigtay Nabadsugida Jubbaland,kaas oo lagu sheegay in uu ka tirsanaa Xubnaha Sar sare ee Al-Shabaab.